Kuboshwe abangama-25 ngesiteleka | News24
Kuboshwe abangama-25 ngesiteleka
isithombe: lethiwe makhanyaAmalunga omphakathi waseMbali Unit 13 ngesikhathi uvale umgwaqo ngoMsombuluko.
KUBOSHWE amalunga omphakathi angama-25 abandakanyeka esitelekeni esimise yonke into eMbali, France kanye naseSlangspruit.
Loku kulandela isiteleka samalunga omphakathi waseMbali Unit 13 ePhase 4, Slangspruit kanye nase-France adinwe avala yonke imigwaqo engenela kulezi ndawo nangamathayi avuthayo, izihlahla, amabhodlela kanye namatshe bekhala ngogesi abathi uhamba njalo, amanzi kanye nezindlu zangasese ezigcwele ezingamonywa.
Lesi siteleka siqale ngoMsombuluko mhla zili-13 kuNhlaba (May) kwaze kwaba uLwesibili sisaqhubeka.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbhele uthe ababoshiwe baboshwe isiteshi samaphoyisa i-Alaxendra Police Station ngecala lokudala udlame emphakathini.
Lo mphakathi ukhala ngogesi abathi uyabahlupha njalo nabathi kwesinye isikhathi kuke kuphele ngisho isonto bengenawo. Bathi into ebangela lokhu ukuthi isigubhu sikagesi esiphakela umphakathi kule ndawo asisenawo amandla anele ukuba singaphakela wonke amalunga omphakathi ohlala kule ndawo njengoba isibalo sawo sesandile.
UMnu Ras Nathi nongumhlali wasePhase 4 uthe sekunesikhathi eside benenkinga kagesi. Uthe balibikela ikhansela lakule ndawo uMnu Thamsanqa Sithole ngalenkinga kanti nabantu baka-Eskom nabo bafika bezobheka kodwa abaphindanga babuya ukuthi beze bazolungisa.
“I-transformer kagesi wethu inamandla amancane kanti abaka-Eskom abafuni ukusikhuphulela amandla. Seloku kwaqala uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zomxhaso kuleya ndawo ugesi uyahlupha uyawa. Sekuneminyaka engaphezu kweyishumi ugesi wakule ndawo uhlupha .
“Umehluko ukuthi ngaphambilini ubuhlupha kakhulu ebusika ngoba abantu abaningi bebebasa kakhulu ngenxa yamakhaza. Kodwa manje sekuyafana usuhlupha ubusika nehlobo akukho labo kungcono khona,” kubeka yena.
Uqhube wathi u-Eskom uyazi ngalenkinga kodwa kuze kube imanje ayikho into abayenzayo.
“Sifuna ukuzama ukukhombisa ukuthi siqinisile ngale nkinga ngoba sibona bengasinakile.Uma ngabe lo gesi usuhamba izinsuku siwumphakathi siyahlukumezeka ngoba ukudla kuyabola. Kukhona nabantu abadala abadla amaphilisi nemithi kanti eminye imithi yabo kumele ihlale kwiziqandisi. Uma ngabe sekuhambe ugesi kuthiwani ke ngalabo bantu nezimpilo zabo?”
Elinye ilunga lo mphakathi lakhona kule ndawo kodwa elingathandanga ukuba kudalulwe igama lalo lithe lona selike laba nenkinga yokuthi ugesi uhambe izinsuku ezinhlanu. “Ukudla kwethu kuyabola. Sipheka ngabogesi nangezitofu zikaparafini nokuyingozi kakhulu. Mina nginengane eneminyaka eli-12 uma ngabe ngihambile ngiye emsebenzini ngiba novalo ukuthi kungenzeka ingozi njengoba ingane ngisuke ngiyishiye ukuba isebenzise isitofu sikapharafini okanye igesi nokuyingozi kakhulu,” kubeka yena.
EMbali akusiyona kuphela indawo ebeyinenkinga yokuvalwa kwemigwaqo kodwa nasendaweni yaseSlangspruit kanye naseFrance nakhona bekuvaliwe abahlali bethi bafuna izimfuno zabo.
Endaweni yase-Slangspruit bakhala ngokuthi bahlushwa ugesi abathi uhleli uhamba bese ubuye usunamandla usulimaza omabonakude babo kanye nezindlu zangasese ezigcwele ezingamonywa. Amalunga akulo mphakathi nawo akhala ngokuthi uma ungena kule ndawo sekunuka iphunga lendle ngenxa yezindlu zangasese ezingekho esimeni.
Endaweni yase-France nabo bakhala ngezinkinga ezifanayo okubalwa khona namanzi abathi kuke kuphele ngisho isonto engekho bese bephoqeleka ukuba bahambe bewacela.
Okhulumela uMasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha uthe iMeya ihambile yayohlangana nezakhamuzi ezingeneme kodwa wathi ezinye izakhamuzi bezingafuni ukulalela.
Izolo ngoLwesithathu ekuseni bekuhambeka kulezi zindawo yize kade kusagcwele amabhodlela kanye namatshe emgwaqeni.